Jobho 28 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jobho anoratidza kusiyana kwakaita pfuma yenyika neuchenjeri (1-28)
Zvinoitwa nevanochera migodhi (1-11)
Uchenjeri hunokosha kupfuura maparera (18)
Kutya Jehovha ndihwo uchenjeri hwechokwadi (28)
28 “Pane nzvimbo inocherwa sirivhaNenzvimbo yegoridhe ravanonatsa;+ 2 Simbi inotorwa muvhu,Uye mhangura inodururwa ichibva mumatombo.+ 3 Munhu anokunda rima;Anopinda murima gobvu achisvika kumicheto yese,Achitsvaga dombo. 4 Anochera mugodhi kure nekunogara vanhu,Kunzvimbo dzakakanganwika, dziri kure nekunofambwa nevanhu;Vamwe varume vanodzika pasi vorembera. 5 Zvekudya zvinobuda pamusoro penyika;Asi pasi payo, pari kushandurwa-shandurwa sekunge iri mumoto.* 6 Mumatombo iwayo mune safaya,Uye guruva rine goridhe. 7 Hapana gondo rinoziva nzira inoendako;Ziso rengavi nhema harisati raiona. 8 Hapana chikara chikuru chati chaitsika;Shumba ine simba haisati yambonyahwaira ikoko. 9 Munhu anorova dombo rakaomarara neruoko rwake;Anopidigura makomo nechepasi pawo. 10 Anochera migero yemvura+ mudombo;Maziso ake anoona chinhu chese chinokosha. 11 Anogadzira madhamhu panotangira nziziUye anoisa pachiedza chinhu chakavanzwa. 12 Asi uchenjeri hungawanikwa kupi?+ Uye kunzwisisa kunobva kupi?+ 13 Hakuna munhu anoziva ukoshi hwahwo,+Uye hahukwanisi kuwanika munyika yevapenyu. 14 Mvura yakadzika inoti, ‘Hahusi mandiri!’ Uye gungwa rinoti, ‘Handisiri ini ndinahwo!’+ 15 Hahugoni kutengwa negoridhe rakanatswa;Uye sirivha haigoni kuyerwa kuti ichinjaniswe nahwo.+ 16 Hahugoni kutengwa negoridhe rekuOfiri+Kana nematombo asingawanzowaniki eonikisi nesafaya. 17 Goridhe negirazi hazvigoni kuenzaniswa nahwo;Hapana kana mudziyo wegoridhe rakanatswa ungachinjaniswa nahwo.+ 18 Matombo ekorari nekristaro haatomboverengwi,+Nekuti homwe izere neuchenjeri inokosha kupfuura izere nemaparera. 19 Topazi+ yekuKushi haingaenzaniswi nahwo;Hahungatengwi kunyange negoridhe rakanatswa. 20 Asi uchenjeri hunobva kupi? Uye kunzwisisa kunobva kupi?+ 21 Hwakavanzirwa maziso echinhu chese chipenyu+ Uye hwakavanzirwa shiri dzekudenga. 22 Kuparadza nerufu zvinoti,‘Nzeve dzedu dzakangoita zvekunzwa chete nezvahwo.’ 23 Mwari anonzwisisa nzira yekuhuwana;Iye chete ndiye anoziva kwahunogara,+ 24 Nekuti anotarisa kunogumira nyika,Uye anoona zvese zviri pasi pedenga.+ 25 Paakapa mhepo simba rayo*+Uye paakayera mvura,+ 26 Paakapa mvura inonaya murau+Uye gore redutu rine mabhanan’ana nzira yaro,+ 27 Akabva aona uchenjeri, ndokutsanangura zvahuri;Akahutanga, ndokuhuedza. 28 Uye akati kumunhu: ‘Inzwa! Kutya Jehovha ndihwo uchenjeri,+Uye kusiyana nezvakaipa ndiko kunzwisisa.’”+
^ Panofanira kunge pari kutaurwa zvinoitwa mumigodhi yekuchera matombo anokosha.
^ ChiHeb., “uremu hwayo.”